Ọnwụ ụgbọ elu ndị Philippines gbaruru na 52
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ozi Na -agbasa Ozi Philippines » Ọnwụ ụgbọ elu ndị Philippines gbaruru na 52
Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Planegbọ elu ndị agha ahụ bu ndị ọrụ ọhụụ a zụrụ ọhụrụ mgbe ọ dara ma gbawa ọkụ ka ọ gbachara ụzọ ụgbọ elu ahụ na elekere 11:30 nke ụtụtụ ụbọchị ụka.
Mmadụ abụọ ọzọ merụrụ nnukwu ahụ merụrụ ahụ nwụrụ n'ụlọọgwụ.
Ọrụ iweghachite maka akụkụ ụgbọelu, gụnyere igbe ojii nke dekọtara data ụgbọ elu, na-aga n'ihu na saịtị ebe ụgbọelu ahụ dara.
Nchoputa zuru oke n'ime ihe odide ahụ nyere iwu ozugbo ọrụ nnapụta na ọrụ mgbake gwụchara.
Onye odeakwụkwọ na-agbachitere na Philippines Delfin Lorenzana kwupụtara taa na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ site n'ihe mberede ụgbọelu na ndịda Philippines agbagogoro 52 dịka mmadụ abụọ ọzọ merụrụ ahụ merụrụ ahụ nke ukwuu nwụrụ n'ụlọ ọgwụ.
Ndị ọrụ njem 96 niile na ndị ọrụ nọ n'ụgbọ elu C-130H nke dara ada mgbe ọ dara ada tupu ehihie Sọnde na agwaetiti Jolo dị na mpaghara Sulu ka a tụbara, na Ngalaba nke National Defense kwuru, na-agbakwunye na ndị agha 49 nwụrụ na 47 ndị ọzọ merụrụ ahụ.
Lorenzana kwuru na ndị nkịtị atọ nọ n'ala bụkwa ndị nwụrụ ma mmadụ anọ ndị ọzọ merụrụ ahụ.
Lorenzana nyegoro iwu maka "nyocha zuru ezu" n'ime ihe mberede ahụ "ozugbo agbasara ndị nnapụta na ndị ọrụ mgbake."
Major General Edgard Arevalo, onye na-ekwuchitere ndị agha na Philippines, kwuru na mkparịta ụka ntanetị na ntanetị na ọrụ nlọghachị maka akụkụ ụgbọelu, gụnyere igbe ojii nke dekọtara data ụgbọ elu, na-aga n'ihu na ebe ụgbọelu ahụ dara, ndị otu nyocha abatala Sulu.
Nkeji ole na ole ihe mberede a mechara, ndị agha na ndị ọrụ afọ ofufo gbaruru ebe ahụ maka ịchọ na nnapụta. "Ndị akaebe hụrụ, ọtụtụ ndị agha hụrụ ka ha si n'ụgbọelu ahụ na-amapụ tupu ọ daa n'ala, na-echekwa ha site na mgbawa nke ọgbaghara ahụ kpatara," ndị agha ahụ kwuru.
Arevalo kwuru na ọghọm ụgbọ elu C-130H bụ otu n'ime "ihe kachasị njọ" mere na ndị agha.
Onye njem nlegharị anya ọhụrụ Tollman meriri n'ọgụ ...
Izu Ịmata njem maka ilekwasị anya na njem maka ...
Ekwesịrị ikwupụta mpaghara njem maka mmeghe site na ...